Kunze kwepakati pekwereta yekenza kuongorora kuongorora muCorsica - TELES RELAY
HOME » MUTSVENE HURUMBA »Kunze kwechikwata chekurwara kenza kuongorora kuCorsica
Corsica asiwo nzvimbo dzose dzeFrance dzinoshushikana neizvi kunze kwezvitoro! The 1er Pakupedzisira kweEpril, dare reParis Administrative rakarambidza hurongwa hwekuvandudzwa kwekambani pamusoro pekuratidza kenza yekuongorora, chibvumirano chinofukidza kugoverwa kwekuongorora kits uye kuongorora sampuli dzakatorwa pakati peCaisse Nationale de l'Assurance Maladie (CNAM) uye wega wega, laboratory ye Cerba.
Vatatu mapoka emakambani avo avo vakagamuchira kukwidziridzwa vakange varambwa neNational Fund of Health Insurance munguva yekupedzisira yekutumira mabhizimusi, vakabva vatanga nzira.
Utano Inishuwarenzi yakashuma kuti hove itsva yakabudiswa musi wa 6 May, uye kupinda mune iyi 10 inogona kuva "mutengesi wekutsvaga" (chirongwa chekukurumidzira) chekupa kanzira yakanyanya kuongorora kitsiti. Kubudiswa kwekitsitsi yekuongorora kunofanira kutangazve kubva ku21 June!
Kutumira kwekukoka kune vanhu kwakavhiringidzwa nguva yekudzorerwa.
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.corsenetinfos.corsica/Rupture-de-stock-en-tests-de-depistage-du-cancer-colorectal-en-Corse_a40807.html
Ngozi ye <em> kenza yemazamu </ em> muvakadzi ve transgender iri pasi ...